Makore mana Mahotera uye Mahotera ekudzoreredza matombo ekugadzira eCagagena
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Makore mana Mahotera uye Mahotera ekudzoreredza matombo ekugadzira eCartagagena
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Makore mana Mahotera uye Mahotera ekudzoreredza matombo ekugadzira eCartagagena
Makore mana Mahotera uye Mahotera, uye San Francisco Investments, inotsigira yeValorem, boka rebhizinesi rine varidzi vevatambi vekutungamira veColombia munhepfenyuro, varaidzo, zvekutengesa uye zvigadziriswazve zviwanikwa, vazivisa hurongwa hwekuvhura hotera yepamusoro uye yekugara yakazvimiririra muCagagena, imwe ye MaSouth America ane nhoroondo uye anokwezva maguta egungwa.
Inowanikwa pamusuwo weguta rekare reCagagena rakakomberedzwa nemasvingo, UNESCO World Heritage saiti, Four Seasons Hotel uye Pachivande Residences Cartagena ichamutsiridza uye kudzoreredza zvivakwa zvinoverengeka zvine mutsika kubvira muzana ramakore rechi 16, kusanganisira Cloister weSanta Francis (Claustro de San Francisco) iyo inosanganisira ye16th-yezana ramakore Svondo Francis Church; iyo Club Cartagena, 1920s Beaux Arts hunyanzvi; uye mana emitambo ane mukurumbira, Teatro Cartagena, Teatro Calamarí, Teatro Bucanero uye Teatro Rialto. Izvi zvivakwa zvichaunzwa kuhupenyu zvakare zvakare kuburikidza nekunyatso dzoreredza chinangwa chekuchengetedza iyo iconic facade uye enhoroondo kuvaka. Yakavakirwa mukati mehupenyu hweGetsemaní, iyo Hotera nePachivande Residences ichapa vashanyi nevagari mukana wekuwana mukana weCagagagena mutsika nemagariro, uye nemifananidzo-yakanaka yezvivakwa.
Kune avo vari kutsvaga kuongorora mhenderekedzo yegungwa yeCaribbean uye zviwi zvezvitsuwa, iri pedyo neBodeguita Pier inobvumira vashanyi kuti vatange zviitiko zveBarú Island kana nzvimbo inozivikanwa yeColombia yeCarlles Islas Corales del Rosario. Vafambi vebhizinesi vanozowanawo zvakananga kunzvimbo yegungano yeguta iri padyo neIhotera.
"Tinodada kudyidzana nemufananidzo wechina weSeasons Seasons kuvaka hotera yepamusoro yeHotel uye Private Residences muguta rine simba reCagagena," anodaro Carlos Arturo Londoño, Mutungamiri, Valorem. "Yakabatanidzwa neSear Seasons yakasarudzika sevhisi, iyo ichangobva kudzorerwa Hotera nePachivande Residences ndiyo inonyanya kutsvaga kutsvaga kurarama nekushanya uye ichashandura nzvimbo yekugamuchira vaeni muCagagagena."
"Iyi hotera nyowani uye Nzvimbo dzekugara dzakavanzika chirongwa chakakosha kwatiri kuti tiwedzere kuvepo kwedu muSouth America, ichitipa mukana usingawanzo shandurwa kuunganidzwa kwakasarudzika kwezvivakwa zvekare munzvimbo yemahara mune rimwe remaguta anokwezva mudunhu iri," anodaro Bart Carnahan, Executive Deputy President, Global Business Development uye Portfolio Management, Four Seasons Hotels uye Resorts. "Tose pamwe nevatinoshanda navo kuValorem, tinotarisira kuunza zvakanakisa mukugamuchira vaeni muCagagena."
Iine zvemukati zvakagadzirwa naFrançois Catroux uye Wimberly Interiors, iyo hotera nyowani ichave nemakamuri gumi nematatu, kusanganisira Royal Suite uye Presidential Suite inozvirumbidza 131 mativi emamita (4,200 mativi emamita) uye 390 mativi emamita (3,500 mativi emamita) enzvimbo yekugara zvichiteerana. Iyo Hotera ichapa matanhatu akasarudzika AvroKO-yakagadzirirwa chikafu uye zvinwiwa zvirevo nezvose zviri zvemukati uye zvekudyira materu pamwe neinoshamisa atrium lounge pamoyo peClub Cartagena. Iyo yedenga remba ichapa yakajeka maonero eCartagena Bay uye yekare guta rakakomberedzwa nemasvingo uko vashanyi vanogona kunakidzwa nedziva bhawa uye grill vachizorora pane zvakavanzika makabana nemabhedha ezuva. Siginecha Makore mana spa pamwe nenzvimbo yekusimbisa muviri ichave iripo kune avo vanoshuvira kuzorora uye kumutsidzira yavo miviri nepfungwa.
Four Seasons Hotel nePachivande Residences Cartagena inosanganisirawo gumi nematanhatu dzimba dzekugara, iyo yekutanga yakamisikidzwa yekugara nzvimbo muRistoric District yakatarwa nematanho epamusoro eakasarudzika mana Seasons sevhisi. Iyo Hotera inosanganisirawo zviuru gumi nezvitanhatu zvemamita (16 mativi emamirimita) emusangano nenzvimbo yechiitiko, zvese zviri mukati mekunaka nzvimbo dzezvakaitika.